Ahoana no amarenan'ny milina fandefasana vola? -News-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co., Ltd.
Ahoana no fivarotan'ny milina fanodinana?
Fotoana: 2019-12-20 Hits: 42
Mihamaro hatrany ireo milina fivarotana hita eny amin'ny toerana ho an'ny besinimaro toy ny arabe, toeram-piantsenana, kianja, trano fivarotana lehibe sy ny maro hafa. Matetika ny olona no manontany ny fomba fiasan'ny milina mpivarotra? Ahoana ny fomba hamarotana mandeha ho azy ny zavatra mandeha ho azy?
Raha ny marina dia samy hafa ny fitsipiky ny fiasan'ny milina mpivarotra samihafa, ary samy hafa ny teknolojia ampiasaina. Androany aho dia hiresaka momba ny fitsipiky ny fiasan'ny milina mahazatra vola mahazatra, izany hoe ny masinina mpivarotra mahazatra.
Misy karazany telo eto amin'ity karazana milina fivarotana ity: ny fizarana fizarana, slot ny vola madinika, ary ny fomba fitaterana entana.
1. Ny mpanjifany dia mametraka vola madinika na volafotsy amin'ny varotra vola madinika. Ny slot de vola dia manaiky ny lanjan'ny vola madinika sy ny fahamarinan'ny vola madinika. Raha poketra sandoka izy io, dia hoentina hiala andro. Amin'ity dingana ity, ny dispenser vola dia handefa ny fampahalalana ny vola voaray amin'ny siram-pitantanana.
2. Ny mpanjifa dia mifidy ny vokatra amin'ny alàlan'ny bokotra na lakile metaly, ary ny faritra fanaraha-maso dia mampitaha ny vidiny amin'ny habetsaky ny vola voaray araka ny fampahalalana nalefan'ilay mpandray vola. Raha ampy ny vola dia handefa famantarana ho an'ny mombamomba ny fitaterana entana handefasana ny entana izy ireo. Raha tsy ampy izany dia hampahafantarina ny mpanjifa fa tsy ampy ny vola amin'ny alàlan'ny fantsom-piainana nomerika LED amin'ny fuselage.
3. Ny mekanika fandefasana fantsona dia mandray ny mari-pamantaran'ny fandefasana avy amin'ny circuit control ary mamadika ny moto mba hanodina ny fantsom-pahavitran'ny fantsona lohataona hihodina sy handehanana.
4. Rehefa vita ny fandefasana ny entana, raha toa ny sandany voaray dia mitovy amin'ny vidin'ny vokatra dia tapitra ny fivarotana. Raha mihoatra ny vidin'ny vokatra ny vola voaray, ny milina mpivarotra tsy mbola voatazona dia miandry amina asa fanampiny ataon'ny mpanjifa. Raha manohy misafidy ireo entana ny mpanjifa dia manohy ny dingana etsy ambony ny milina mpivarotra tsy mbola voatonona. Raha misafidy ny miova ny mpanjifa, ny fizaram-pahefana lehibe mifehy ary esory amin'ny vidin'ny vokatra, ary mandefa ny fahasamihafana amin'ny mpandray vola. Ny mpandray vola dia hanova ny vola madinika araka ny fampitam-baovao nalefan'ny làlana fanaraha-maso lehibe. Amin'izao fotoana izao dia mifarana ny fiantsenana.
Amin'ity fomba fiasa ity, raha toa ka tsy mifandray amin'ny Internet ny milina fivarotana tsy manam-petra, dia tahiry ao an-toerana ny tahiry varotra rehetra; raha toa ka mifandray amin'ny tambajotra ilay milina fivarotana tsy voafidy, hampiditra ny angon-drakitra ho an'ny mpizara background, ny mpandrindra ny masinina mpivarotra dia afaka miditra ao amin'ny kaonty fitantanana ny fahitana mba hijery ny toe-javatra varotra ny milina fivarotana amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza, ary ny fitantanana mora kokoa.
Manam-pahaizana manokana amin'ny keypad indostrialy mihoatra ny 13 taona izahay, koa raha manana tetik'asa amin'ny milina fivarotana ianao dia aza misalasala mifandray aminay momba ny antsipirian'ny keypad.
Taloha: SINIWO dia mirary Krismasy sambatra sy taom-baovao sambatra ho antsika rehetra.